Sergio Ramos oo ku HANJABAY inuu ka tagi doono Real Madrid hadii ay dhamaadka xili ciyaareedkan… – Gool FM
Sergio Ramos oo ku HANJABAY inuu ka tagi doono Real Madrid hadii ay dhamaadka xili ciyaareedkan…
Dajiye December 27, 2018
(Madrid) 27 Dis 2018. Sida ay shaaca ka qaadeen wararka ka imaanaya gudaha dalka Spain Sergio Ramos ayaa ku hanjabay inuu ka tagayo kooxda Real Madrid hadii uu markale dib ugu soo laabto Jose Mourinho dhamaadka xili ciyaareedkan.
Jose Mourinho ayaa lala xiriirinayay inuu dib ugu soo laaban doono kooxda Real Madrid xili ciyaareedka soo aadan si uu u noqdo badalka Santiago Solari.
Manchester United ayaa go’aansatay 9 cisho ka hor inay shaqada ka ceyriso macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, kadib markii ay la kulmeen natiijooyin xun, xili Jose uu ku qaatay garoonka Old Trafford mudo dhan saddex sano.
Wargeyska “Mundio Deportivo” ayaa sheegay in hadii ay Real Madrid shaqaaleysiiso macalinkii hore kooxda Manchester United ee Jose Mourinho, ay wajigi doonto Los Blancos caqabad cusub ee ku aadan in Sergio Ramos uu ku hanjabi doono ka tagista garoonka Santiago Bernabéu.
Xiriirka ka dhaxeeya Sergio Ramos iyo macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho oo haatan ah 55 jir, ayaa burburay ka hor inta uusan ka tagin Real Madrid sanadkii 2013.
Si kastaba difaaca reer Spain ee Sergio Ramos ayaa wuxuu maalmo kahor si cad u sheegay in kooxdiisa Real Madrid aysan u baahneyn tababare kale ee cusub.
Barcelona oo soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Jeison Murillo + SAWIRO
“Liverpool waxay awoodaa inay dib u soo celiso xili ciyaareedkii taariikhiga ahaa ee kooxda Arsenal” - Unai Emery